Umqondo walesi sifo, izimbangela zalokho okwenzekayo kanye nemithetho yokwelapha.
Sitshela ukuthi yi-hyperplasia ye-endometrial, nokuthi isongela kanjani impilo yabesifazane
Uma odokotela behlonza i-hyperplasia ye-endometrial, kunzima kumuntu ongenakho ukuqonda ukuthi kusho ukuthini. Njengoba lokhu kuyinkambo engaqondakali kubantu abavamile, kuyasiza ukuyiqonda ngokuningiliziwe.
Ukukubeka kalula, lokhu kusho ukukhula kwegciwane namathambo amasha avela kuwo. Isimo esinjalo singavela ngokuphelele kunoma yimuphi umzimba womuntu. Ngakho-ke, umuntu angaba ne-hyperplasia yezicubu, i-epithelium ne-mucosa. Kulesi sihloko, sizokhuluma ngezinhlobo ezivame kakhulu ze-hyperplasia.
Lesi yisifo esithandwa kakhulu emkhakheni wezokwelapha. Ngokuvame ukwenzeka emzimbeni wesibeletho futhi ushintshe i-mucosa nezigunja zelungu. Uma ukhuluma ngemigomo elula, umzimba wesisu uba mkhulu kunomkhuba ngenxa ye-endometrium egqamile.
Ukudla okungalungile kwama-contraceptive ama-hormonal
Ukungabi khona isikhathi eside kwe-ovulation
Ukuvuvukala okungapheli kwe-endometrium engazange iphathwe
Izifo ze-metabolic nezifo ezihlobene
Esikhathini sokuqala, le nqubo iyingozi, kodwa uma lesi sifo singatholakali ngokuhamba kwesikhathi, isakhiwo singashintsha sibe sibi futhi siholele emdlalweni.
Isifo sibonakala nini?
Ngokuvamile, abesifazane bahamba nge-hyperplasia ngesikhathi sokuya esikhathini, ngoba ngaleso sikhathi abameleli bezintombi ezibuthakathaka bavame ukuba nezimpande ze-hormonal, futhi imisebenzi ye-ovari ibuhlungu kakhulu.
Izimpawu ezisemqoka yizi:
Ukuphulwa komjikelezo wesimiso.
Ukuphaphaza okukhulu ngesikhathi sokuya esikhathini noma ngisho naphakathi komjikelezo, futhi ukuqina kokukhipha indima akuyidlala futhi kunoma yikuphi okubonisa ukuthi i-hyperplasia.
Ukuphuma kwegazi phakathi kokuya esikhathini.
Ubuhlungu besisu esingaphansi.
Ezinye izinhlobo ze-hyperplasia
Izithobezi ezincane. Muva nje, lesi sifo sithinteka kakhulu ngamantombazane aneminyaka engu-20 ubudala. Uma ungabonisi udokotela ngesikhathi esifanele, ungaholela emdlalweni webele. Izimpawu eziyinhloko: ubuhlungu nokuqina emigqumeni yezinyosi, ukungahambisani nokuya esikhathini, ukushintsha kwemizwelo nokukhuphuka emanzini.
Isisu. Kubonakala njengomphumela wezifo ze-hormonal kanye nomsebenzi wezinhlayiya ze-endocrine. Kungaba futhi umphumela we-gastritis.
I-Lymphonoduses. Ukwanda kwawo kungase kubonise izilonda ezinonya ezingxenyeni eziseduze nezinyathelo zomzimba ezikhulisiwe.
Isibindi. Isizathu salokhu kungaba yindlala yegazi. Ezimweni eziningi, ukungenelela kokuhlinzwa kusetshenziselwa ukwelashwa.
I-prostate gland. Uma ungaqali ukwelashwa ngokuhamba kwesikhathi, ukwanda kwezicubu ezitholakala ku-prostate kungaholela ekuvimbeleni ukwelashwa komchamo. Ngokujwayelekile, le hyperplasia iqala iminyaka ngenxa yokukhiqizwa kwe testosterone.
Ezimweni eziningi, i-hyperplasia iphathwa ngemithi ehlukahlukene. Kodwa ezimweni ezinzima kakhulu, isiguli siyasebenza. Ikakhulukazi iphathelene ne-hyperplasia ye-endometrium yesibeletho. Owesifazane ususa izicubu eziqinisiwe ezivela engxenyeni yangaphakathi, kodwa wabuye wachaza futhi imithi yezidakamizwa ezingakwazi ukulinganisa imvelaphi ye-hormonal futhi ivimbele ekuvelekeni kwenqubo enjalo esikhathini esizayo.
Ukuze unqume le nqubo ngokuhamba kwesikhathi, udinga ukuqapha ngokucophelela izimpawu zomzimba wakho futhi ufune iseluleko kudokotela ngokuhamba kwesikhathi. Ochwepheshe kuphela abaqeqeshiwe bazokwazi ukunquma umsuka wale nqubo futhi bazokwazi ukumisa ukuthuthukiswa kwayo.
Izifo ze-gynecological, purulent colpitis
Imisebenzi ye-cerebral hemisphere ye-forebrain
Ukwelashwa Kungazelelwe: Izimbangela Nezindlela zokwelapha
Kuyini ukuqothula futhi kuyingozi yini izinwele?
Indlela yokubusa phezu kwamadoda angcono kakhulu?
Izambatho zendoda yebhizinisi
Izakhiwo eziwusizo zokusanhlamvu, ama-oatmeal awachotshoziwe
Iphethini yengubo yokudoba ngempuphu ¾ nokungenamikhono
Ukudla okunempilo nokuphephile kwabesifazane abakhulelwe
Iyiphi inzalo ebeletha indlu yangasese?
Ingaphakathi ekamelweni lentsha
I-pizza "Izinkukhu ezintathu" ezine-Pesto sauce